လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာပြandနာများနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအတွက်စပမ်းအီးမေးလ် (၂၀၁၀) - သင်၏ ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများအတွက်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်ပမ် E-mail ကိုအတူစားသုံးသူ (2010)
ယောရှုသည် Fogel, Ph.D
စာတိုက်လိပ်စာ: 2900 Bedford Avenue, 218A, ဘရွတ်ကလင်း, နယူးယော့, 11210, အမေရိကန်နိုင်ငံ
စာရေးသူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ / အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဝက်ဘ်ဆိုက်
ယောရှုသည် Fogel က New York မြို့တက္ကသိုလ်ဘရွတ်ကလင်းကောလိပ်၏စီးပွားရေးတက္ကသိုလ်ဦးစီးဌာန၏စီးပွားရေးအစီအစဉ်အတွက်လုပ်ကိုင်သောတွဲဘက်ပါမောက္ခဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနအကျိုးစီးပွားစားသုံးသူအပြုအမူ, e-commerce နဲ့ e-ကျန်းမာရေးပါဝင်သည်။
ဆမ် Shlivko, BS
ဥပဒေကျောင်းသား, New York ကဥပဒေကျောင်း
ဆမ် Shlivko နယူးယောက်စီးတီးရှိနယူးယောက်ဥပဒေကျောင်းမှဥပဒေကျောင်းသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့သုတေသနအကျိုးစီးပွားသည်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုဥပဒေရေးရာရှုထောင့်တို့ပါဝင်သည်။
ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြော်ငြာများသည် spam e-mail ကြော်ငြာထုတ်ကုန်များမှတစ်ဆင့်အွန်လိုင်းမှရောက်လာသည်။ ဤကြော်ငြာများကိုစားသုံးသူ၏တုံ့ပြန်မှုများကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများ (SPP) နှင့်ပါ ၀ င်ပြီးကောလိပ်ကျောင်းသားကျောင်းသားများ (n = 200) အားလက်ခံခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကို ၀ ယ်ခြင်းရှိမရှိမေးမြန်းခဲ့သည်။ SPP ရှိသူများသည် SPP မရရှိသောသူများထက် (၉၃.၃% နှင့် ၆၈.၁% နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၆၃.၁%၊ p = 93.3)၊ ဖွင့် / ဖတ်ခြင်း (၆၆.၇% နှင့် ၁၄.၁% နှင့် p <68.1) နှင့်ဝယ်ယူမှုတို့တွင် (၄၆.၇% နှင့် ၄.၉% နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက) ၆၆.၇%၊ <0.042) spam ကိုအီးမေးလ်ကနေညစ်ညမ်း။ Multivariate Logistic Regression တွင်လူ ဦး ရေ (အသက်၊ လိင်၊ လူမျိုး၊ မျိုးနွယ်စု)၊ အင်တာနက် (အင်တာနက်အသုံးပြုမှု၊ နံပါတ် spam e-mail များလက်ခံရရှိခြင်း) နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ (မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ရူပ၊ စိတ်ဖိစီးမှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှု) ပြောင်းလဲနိုင်မှုများကိုချိန်ညှိလေ့လာသည်။ SPP သည် spam e-mail မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖွင့် / ဖတ်ခြင်း (OR: 66.7, 14.1% CI: 0.001, 46.7) နှင့်ဝယ်ယူခြင်း (OR: 4.9, 0.001% CI: 4.51, 95) နှင့်သိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသဘောထားများကိုဖွင့် / ဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည် (OR: 1.05, 19.33% CI: 8.76, 95) နှင့် spam e-mail မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဝယ်ယူခြင်း (OR: 1.78, 43.27% CI: 1.37, 95) ။ အခြားလူ ဦး ရေအချိုးအစား၊ အင်တာနက် (သို့) စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှုများတွင်မည်သည့်အသင်းအဖွဲ့မျှမရှိပါ။ ညစ်ညမ်းစာပေအေနှာက်အယှက်များကိုအီးမေးလ်ဖွင့် / ဖတ်၊ ဝယ်၊ SPP ရှိသူများကိုအီးမေးလ်ကြော်ငြာများနှင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းသည် spam e-mail ပို့ခြင်း၏အထွေထွေကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာပြissueနာအပြင်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအကျိုးသက်ရောက်မှုများရှိသည်။
အင်တာနက်ကို; အီလက်ထရောနစ်စာပို့; စျေးကွက်ရှာဖွေရေး; ကြော်ငြာ; လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကမောက်ကမဖြစ်မှု; စားသုံးသူအပြုအမူ; e-commerce, E-ကျန်းမာရေး, ကောလိပ်ကျောင်းသားများကို
ဒါဟာမကြာခဏညစ်ညမ်းအင်တာနက်လျင်မြန်စွာကြီးထွားနောက်ကွယ်မှကြောင်းသိရသည်။ စာရင်းဇယားကိုအင်တာနက်အမြင်ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်သောသူအပေါင်းတို့၏ 43%, အားလုံးအင်တာနက်ကိုဒေါင်းလုဒ်၏ 35% ညစ်ညမ်းနှင့်ဆက်စပ်သောဖြစ်ကြောင်းအပါအဝင်အစီရင်ခံ, နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းစောင့်ကြည့်ဘို့ပျမ်းမျှအချိန် 15 မိနစ် (OnlineEducation, 2010) ကြောင်းရှိပါတယ်။ အင်တာနက်ကိုစီးပွားရေးနှင့် Non-စီးပွားဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးညစ်ညမ်းပါဝင်သောညစ်ညမ်းအမျိုးမျိုးဘို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ ပမ်က e-mail ကိုစီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းစျေးကွက်ဖို့အသုံးပြုတလမ်းတည်းဖြင့်ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးက 2008 စစ်တမ်းအားလုံး spam များကို e-mail, ၏ 6.5% ညစ်ညမ်းသည့်အကြောင်းအရာများ (PandaSecurity, 2009) ရက်နေ့တွင်ကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအကြောင်းကိုခိုင်ခံ့သောငြင်းခုံမှုများရှိပါသည်။ , compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီထိုကဲ့သို့သောအပြုအမူများဆက်လက်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပွုနိုငျ) 1) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းမိသားစု, အိမ်ထောင်ရေး, နှင့်မယား၏ဘာသာရေးနှင့်ရိုးရာစံတန်ဖိုးများဆန့်ကျင်သည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနှင့်အကျင့်ပျက်အပြုအမူကိုအားပေးအားမြှောက်,23) ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း: အနုတ်လက္ခဏာသွင်ပြင်လက္ခဏာတို့ပါဝင်သည် အသုံးပြုမှုကိုအဆိုး,4အစစ်အမှန်ကမ္ဘာရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကိုထိခိုက်စေနိုင်သည်) နှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအမျိုးသမီးများ၏လိင်အရအခွင့်အရေးသရုပ်ဖော်ထားပါတယ်။ positive ရှုထောင့်တို့ပါဝင်သည်: အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ရှု 1) လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုနည်းစနစ်စောင့်ကြည့်မှတဆင့်တိုးမြှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအသိပညာဘို့ခွင့်ပြုနှင့် 2) စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အရက်မှီခိုရှိသူများကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း (Doring, 2009) ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ယာယီကယ်ဆယ်ရေးနှင့်အာရုံရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
လူငယ်လူရွယ်များအကြားလိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်း၊ အော့ဖ်လိုင်းမိတ်ဖက်များနှင့်လိင်ဘဝကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲခြင်းတို့သည်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်အွန်လိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားသောအကြောင်းအရာများကိုအသုံးပြုရန်အကြောင်းများဖြစ်သည် (Boies, 2002; Goodson, McCormick, & Evans, 2000, Goodson et al ။ ) ။ , 2001; Lam & Chan, 2007) ။ ဤအလားအလာရှိသောလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးများသည်လူငယ်များသည် spam e-mail မှအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရန်စိတ်ဝင်စားရခြင်း၏အကြောင်းအရင်းဖြစ်နိုင်သည်။ လိင်ကျန်းမာရေးအခြေအနေနှင့်လေ့လာမှုများနှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများဝယ်ခြင်းသို့မဟုတ် spam e-mail တွင်ကြော်ငြာထားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဝယ်ယူခြင်းအကြောင်းလေ့လာမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ လေ့လာမှုများကိုကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် spam e-mail နှင့်ကျန်းမာရေးအခြေအနေများအကြောင်းလေ့လာမှုနှစ်ခုသာပြုလုပ်သည်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရလိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများ (SPP) သည်စာဖတ်ခြင်း / ဖွင့်ခြင်းနှင့် spam e-mail မှလိင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ယူရာတွင်အလေးသာမှုအချိုးမြင့်မားသည် (Fogel & Shlivko, 2009) ရှိသည်။ အခြားလေ့လာမှုတစ်ခုအရကိုယ်အလေးချိန်ပြproblemsနာရှိသောသူများသည်စာဖတ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်းနှင့်ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချသည့်ပစ္စည်းများကို spam e-mail မှ ၀ ယ်ခြင်း (Fogel & Shlivko, 2010) တွင်အလေးသာမှုအချိုးမြင့်မားကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
ကျနော်တို့ / ဖွင့်ပွဲနှင့် / သို့မဟုတ် spam များကို e-mail, ကနေညစ်ညမ်း purchasing ဖတ်နေ, လက်ခံရရှိမှုအတွက် spp နှင့်အတူသူတွေထဲမှာဆိုလေ့လာမှုများသတိထားနေကြသည်မဟုတ်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ spp ၏ရှေ့မှောက်တွင်လက်ခံ, အဖွင့် / စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်နှင့် / သို့မဟုတ် spam များကို e-mail, ကနေကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ညစ်ညမ်း purchasing လျှင်ငယ်ရွယ်လူကြီးများအကြားတွင်ဆုံးဖြတ်ရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ငါတို့သည်လည်းမဆိုပုဂ္ဂိုလ်ရေးလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကိုအင်တာနက် variable တွေကို, ဒါမှမဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုမဆို spam များကို e-mail, လက်ခံရရှိသူအမူအကျင့်နဲ့ဆက်စပ်နေကြသည်ရှိမရှိလေ့လာတယျ။
သင်တန်းသားများကို (ဎ = 200) နယူးယောက်စီးတီးရှိထားတဲ့အတွင်းပိုင်းမြို့ခရီးသည်ကောလိပ်အတွက်စာရင်းသွင်းဘွဲ့ကြိုကျောင်းသားများကိုခဲ့ကြသည်။ အဆင်ပြေနမူနာကောလိပ်မှာစာသင်ခန်းနှင့်အများပြည်သူသောနေရာများအတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူရှိသူများအနေဖြင့်တုံ့ပြန်မှုရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ 94.3% ၏တစ်ဦးကတုန့်ပြန်မှုနှုန်းဟာ 212 တစ်ဦးချင်းစီကနေချဉ်းကပ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ ဒေတာကိုမေလ 2007 အတွက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစစ်တမ်းကိုအမည်မသိနှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဘုတ်အဖွဲ့ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းကနေကင်းလွတ်ခွင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဟယ်လ်စင်ကီ၏ကြေညာစာတမ်း၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူလေ့လာမှုအတွက်လိုက်နာခဲ့ကြသည်။ ပါဝင်သူအကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်ရယူခဲ့ပါတယ်။
လူဦးရေအချိုးအစား Variables ကို
အဆိုပါလူဦးရေအချိုးအစား variable တွေကို (နေ့စဉ်) အသက်ဆက်မပြတ် variable တွေကို (အနှစ်), နာရီကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုထည့်သွင်းခြင်း, spam များကို e-mail အရေအတွက် (နေ့စဉ်) ကိုလက်ခံရရှိခဲ့သည်။ အမျိုးအစား variable တွေကိုလိင်နှင့်ပြိုင်ပွဲ / လူမျိုးစု (အဖြူ / Non-အဖြူ) ပါဝင်သည်။
"မ။ " "ဟုတ်ကဲ့" ၏ရွေးချယ်မှုနှင့်အတူသို့မဟုတ် "သင်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများရှိသည်ကိုသင်ယုံကြည်ပါသလား": သင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ
ပမ် E-mail ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပစ္စည်းများ
သင်တန်းသားများကိုမေးမွနျးခဲ့သညျ: 1) သင်အတိတ်နှစျတှငျညစ်ညမ်းအကြောင်းကို spam များကို e-mail, လက်ခံရရှိခဲ့ပါ ?, 2) ဟုတ်ကဲ့လျှင်သင်ဖွင့်ထားပြု e-mail ကို ?, နှင့်3ဖတ်ပါ) သင်ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် e-mail ကိုဖတ်ပါလျှင်, သင်ပေးထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်မှတစုံတခုကိုဝယ်ယူရန်ခဲ့တာလဲ ရွေးချယ်မှုအဖြေ "မ။ " "ဟုတ်ကဲ့" ခဲ့ကြသည်သို့မဟုတ်
အဆိုပါ Rosenberg ကကိုယ်ပိုင်လေးစားမှုစကေးတစ်ဦးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင်တိုင်းတာ (Rosenberg က, 1986) ဖြစ်ပါသည်။ ဒါဟာ 10 ထံမှ = ပြင်းပြင်းထန်ထန် = ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူ 1 မှသဘောမတူအထိတစ်ဦး Likert-စတိုင်စကေးအပေါ်တိုင်းတာ4ပစ္စည်းများပါဝင်သည်။5reverse-coded ပစ္စည်းများရှိပါတယ်။ သာ. ကွီးမွတျ Self-လေးစားမှုပိုမိုမြင့်မားရမှတ်များကညွှန်ပြနေသည်။ ဒီနမူနာထဲမှာ Cronbach alpha ယုံကြည်စိတ်ချရ 0.87 ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှုစကေးယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်တရားဝင်အတိုင်းအတာ (Cohen & Williamson, 1988) ။ ၎င်းတွင် Likert ပုံစံအတိုင်းအတာ ၁၀ ခုပါ ၀ င်ပြီး 10 = ဘယ်တော့မှ0= မကြာခဏဖြစ်လေ့ရှိသည်။ ပြောင်းပြန် -coded ပစ္စည်းများ4ရှိပါတယ်။ ပိုမိုသိမြင်သောစိတ်ဖိစီးမှုများကိုပိုမိုမြင့်မားသောရမှတ်များဖြင့်ညွှန်ပြသည်။ ဒီနမူနာအတွက် Cronbach alpha ယုံကြည်စိတ်ချရ4ဖြစ်ခဲ့သည်။
အဆိုပါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်သဘောထားများကိုစကေးဒီစစ်တမ်းကိုဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။ "ငါလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်အကြောင်းကိုအွန်လိုင်းသင်ယူဖို့လိုပါတယ်"))3"ငါသည်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့လိုပါတယ်" 1 နှင့် 2) "ငါနှင့် ပတ်သက်. တိကျမှန်ကန်သတင်းအချက်အလက်နှင့်ငါ့ကိုပေးရန်အင်တာနက်ယုံကြည်စိတ်ချ: ဒါဟာ3ပစ္စည်းများပါဝင်သည် လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကို။ "ဒီ3ပစ္စည်းများကိုတစ်အကွာအဝေးနှင့်အတူတစ်ဦး Likert-စတိုင်စကေးအပေါ်တိုင်းတာခဲ့ကြသည် 1 ထံမှ = ပြင်းပြင်းထန်ထန်5မှသဘောမတူ = ပြင်းပြင်းထန်ထန်သဘောတူသည်။ ဒီနမူနာထဲမှာ Cronbach alpha ယုံကြည်စိတ်ချရ 0.95 ဖြစ်ခဲ့သည်။
ဖော်ပြရန်စာရင်းဇယား variable တွေကိုများအတွက်တွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။ သင့်လျော်သည့်အတိုင်း Pearson chi-square ဆန်းစစ်ခြင်းများသို့မဟုတ် Fisher ၏အတိအကျစမ်းသပ်မှု (ဆဲလ်နမူနာအရွယ်အစား <၅) ကို SPP နှင့်ပါ ၀ င်မှုမရှိသူများကိုနှိုင်းယှဉ်ရာတွင်အသုံးပြုသောသီးခြားမေးခွန်းများအတွက်လက်ခံခြင်း၊ ဖွင့် / ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail ကြော်ငြာမှ ၀ ယ်ခြင်း ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများ လက်ခံခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း၊ ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail ကြော်ငြာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများမှ ၀ ယ်ခြင်း၏ကွဲပြားခြားနားသောရလဒ်သုံးမျိုးနှင့်အတူထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးဆုတ်ယုတ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုရလဒ်ကို variable ကိုသုံးကွဲပြားခြားနားသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမော်ဒယ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ ပထမဆုံးမော်ဒယ်တွင် SPP ၏ကိန်းဂဏန်းသာပါဝင်သည်။ ဒုတိယပုံစံတွင်လိင်မှုဆိုင်ရာ SPP နှင့်လူ ဦး ရေစာရင်းပြောင်းလဲမှုများပါ ၀ င်သည်။ တတိယပုံစံတွင် SPP၊ လူ ဦး ရေစာရင်းပြောင်းလဲမှုနှင့်စိတ်ဓာတ်ရေးရာပြောင်းလဲမှု၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်နိုင်မှုသဘောထားများပါဝင်သည်။ PASW ဗားရှင်း5(PASW, 18) ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 နမူနာများ၏ဝိသေသလက္ခဏာများပြသထားတယ်။ နမူနာအများစုဟာ spp ရှိသည်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ ပျမ်းမျှအသက်လုနီးပါး 21 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်နီးပါးသုံးပုံနှစ်ပုံအမျိုးသမီးတွေ ရှိ. , အနည်းငယ်ပိုပြီးထက်ဝက်ကျော်သည် non-ဖြူ၏။ နေ့စဉ်အင်တာနက်ကိုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. ပျမ်းမျှအသုံးပြုမှုနီးပါး4နာရီကြီးနှင့် 28 ပျမ်းမျှ spam များကို e-mail, မက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိခဲ့ကြသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက္ခဏာများနှင့် ပတ်သက်. အဆင့်မြင့် Self-လေးစားမှုပျမ်းမျှ, တစ်ခါတစ်ရံရိပ်မိဘဲလျက်စိတ်ဖိစီးမှု၏ပျမ်းမျှအဆင့်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသဘောထားများနှင့်အတူ disagreeing ပျမ်းမျှအဆင့်ရှိ၏။
မှတ်ချက်: M က = ယုတ်, SD က = စံသွေဖည်။
စားပွဲတင် 2, အဖွင့် / စာဖတ်ခြင်းကိုလက်ခံရရှိနှင့် spam များကို e-mail, ကနေကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ညစ်ညမ်း purchasing များအတွက် spp နှင့်မရှိဘဲသူတို့အဘို့နှိုင်းယှဉ်ပြသည်။ အားလုံးသုံးနှိုင်းယှဉ်ဘို့, spp ရှိသူများ spp မပါဘဲများထက်သိသိသာသာ သာ. ကြီးမြတ်ရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့ပါတယ်။ ဤသည်ဝယ်ယူမှုများအတွက်, ဖွင့်ပွဲ / စာဖတ်ခြင်းအဘို့အ 25% ထက် ပို. မြင့်မားနှင့်ပိုမိုမြင့်မား 50% ထက်ပိုမိုလက်ခံရရှိများအတွက်ပိုမိုမြင့်မား 40% ထက် ပို. ပါဝင်သည်။
အဆိုပါ univariate သို့မဟုတ် multivariate Logistic ဆုတ်ယုတ်မဆိုမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည် (Data ပြမဟုတ်) spam များကို e-mail, ကနေကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ညစ်ညမ်းလက်ခံရရှိမှုအတွက် spp နှင့်မရှိဘဲသူတို့အားအကြားပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီး။ စားပွဲတင်3Logistic ဆုတ်ယုတ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းကိုပြသ
ညစ်ညမ်းများအတွက်ဖွင့်ပွဲ / စာဖတ်ခြင်း spam များကို e-mail, အဘို့။ မော်ဒယ် 1 ညစ်ညမ်းများအတွက် spam များကို e-mail, ဖတ်ရှုခြင်း / ဖွင့်လှစ် spp မပါဘဲများထက်ဖွယ်ရှိ 12 ကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်၏ spp နှင့်အတူသူတို့အဘို့သိသိသာသာလေးသာမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။ မော်ဒယ်2မျှသိသာ covariates နဲ့ဆင်တူလေးသာမှုအချိုးအစားပြသထားတယ်။ မော်ဒယ်3အဖွင့် / ညစ်ညမ်းများအတွက် spam များကို e-mail, ဖတ်ရှုခြင်းအဘို့အဖွယ်ရှိ4ကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်၏ spp နှင့်အတူသူတို့အဘို့သိသိသာသာလေးသာမှုအချိုးအစား (စပုံကိုကြည့်ပါ) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမလူဦးရေအချိုးအစားသို့မဟုတ်အင်တာနက် variable တွေကိုသိသိသာသာခဲ့ကြသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသဘောထားများစကေးသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကို 1.37 တစ်သိသိသာသာလေးသာမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။
စားပွဲတင်4Logistic ဆုတ်ယုတ်ညစ်ညမ်းများအတွက် spam များကို e-mail, purchasing များအတွက်လေ့လာဆန်းစစ်ပြသထားတယ်။ မော်ဒယ် 1 ညစ်ညမ်းများအတွက် spam များကို e-mail, purchasing များအတွက် spp မပါဘဲများထက်ဖွယ်ရှိ 17 ကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်၏ spp နှင့်အတူသူတို့အဘို့သိသိသာသာလေးသာမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။ မော်ဒယ်2မျှသိသာ covariates နဲ့ဆင်တူလေးသာမှုအချိုးအစားပြသထားတယ်။ မော်ဒယ်3ညစ်ညမ်းများအတွက် spam များကို e-mail, purchasing များအတွက်ဖွယ်ရှိ 8 ကြိမ်ထက် သာ. ကြီးမြတ်၏ spp နှင့်အတူသူတို့အဘို့သိသိသာသာလေးသာမှုအချိုးအစား (စပုံကိုကြည့်ပါ) ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမလူဦးရေအချိုးအစားသို့မဟုတ်အင်တာနက် variable တွေကိုသိသိသာသာခဲ့ကြသည်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသဘောထားများစကေးသာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကို 1.37 တစ်သိသိသာသာလေးသာမှုအချိုးအစားရှိခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ spp ရှိသူများအဖွင့် / စာဖတ်ခြင်းနှင့်လည်း spam များကို e-mail, ကနေကမ်းလှမ်းခဲ့သည်ညစ်ညမ်း purchasing အတွက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်စိတ်ဝင်စားဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသဘောထားများဒီအဖွင့် / စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေလူဦးရေအချိုးအစားနှင့်အင်တာနက် variable တွေကို, ဒီအဖွင့် / စာဖတ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ယူမှုအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်ကြသည်မဟုတ်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖွင့်လှစ် / ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail မှကမ်းလှမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများဝယ်ယူခြင်းတို့၏တွေ့ရှိချက်များသည် SPP ရှိသူများအကြား spam e-mail အတွက်စားသုံးသူအပြုအမူနှင့်ပတ်သက်သောလက်ရှိသုတေသနကိုကျယ်ပြန့်စေသည်။ ဤသုံးစွဲသူများသည် spam e-mail (Fogel & Shlivko, 2009) မှရရှိသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များကိုစိတ် ၀ င်စားရုံသာမက spam e-mail မှကမ်းလှမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုလည်းစိတ်ဝင်စားသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လေ့လာမှုကိုဖွင့် / ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail မှကမ်းလှမ်းသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail မှလိင်စွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်သောအခါ (Fogel & Shlivko, 2009) အရေးကြီးသောအချက်အချို့ရှိသည်။ တူညီခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားမှု။ တူညီမှုတစ်ခုသည် SPP ရှိသူများအတွက်ဖွင့် / ဖတ်ခြင်းနှင့် spam e-mail မှကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးသော ၀ ယ်ခြင်းများအတွက်လေ့လာမှုနှစ်ခုလုံးတွင်တူညီသောရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ အဓိကကွာခြားချက်မှာဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းနှင့်အလေးသာမှုအချိုး၏ပမာဏဖြစ်သည်။ တူညီသော variable တွေကိုနှစ် ဦး စလုံးလေ့လာမှုများအတွက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခဲ့ကြသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ရလဒ်နှင့်အတူဤလေ့လာမှုတွင်အဖွင့် / ဖတ်ခြင်းအတွက်အလေးသာမှုအချိုး4၀ ယ်ယူမှုအတွက် 8 အထိတိုးတက်ခဲ့သည်။ လိင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောထုတ်ကုန်များ (Fogel & Shlivko, 2009) ၏ရလဒ်နှင့်အတူလေ့လာမှုတွင်အဖွင့် / ဖတ်ခြင်းနှင့် ၀ ယ်ခြင်းတို့အတွက်အလေးသာမှုအချိုးသည် ၈ တွင်အတူတူဖြစ်သည်။ ဤပုံစံကလိင်စွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများရှိသူများအကြားဖွင့်လှစ်ခြင်း / ဖတ်ခြင်းများအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပမာဏသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်လိင်စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်မြင့်မားသည်မဟုတ်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအတွက် spam e-mail ပေါ်ရှိအကြောင်းအရာကို spam e-mail အပေါ်အပြုသဘောဆောင်သောသဘောထားများကိုလျော့နည်းစေသည့်အကြောင်းအရင်းများကိုထိုးနှက်ရန်သို့မဟုတ်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေရန်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်းဖြစ်နိုင်သည် (Morimoto & Chang, 8) ။
ထို့အပြင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားသောသဘောထားများကိုသာ spam e-mail မှညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုဖွင့် / ဖတ်ခြင်းနှင့်ဝယ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသည်။ ကောလိပ်ကျောင်းသားများအကြားလိင်ကွဲပြားမှုကိုအစီရင်ခံသည့်လေ့လာမှုများစွာရှိသော်လည်း (Boies, 2002; Byers, Menzies, & O'Grady, 2004; O'Reilly, Knox, & Zusman, 2007; Selwyn, 2008) နှင့်လူငယ်များ (Hald, 2006) အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုအမျိုးသားများထက်အမျိုးသမီးများထက်အမျိုးသားများပိုမိုစိတ် ၀ င်စားလာမှုနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့သည်ဤသို့ကွဲပြားခြားနားမှုများမတွေ့ရှိခဲ့ပါ
လေ့လာမှုန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ပထမဦးစွာဒေတာတစ်ဦးတည်းသာအဖွဲ့အစည်းများထံမှရရှိသောခဲ့ကြသည်နှင့်အမျိုးသားရေးနမူနာဖို့ယဘေုယမည်မဟုတ်ပါ။ ဒုတိယအနေလူငယ်တစ်ဦးအရွယ်ရောက်နမူနာလေ့လာနေတစ်ခုရှေးဟောင်းပစ္စည်းဖြစ်ရသော spp နှင့်အတူသာ 15 တစ်ဦးချင်းစီရှိကြ၏။ တတိယကျနော်တို့ဖွင့်ပွဲ / စာဖတ်ခြင်းနှင့် spam များကို e-mail, ကနေညစ်ညမ်း purchasing များအတွက်တိကျသောအကြောင်းပြချက်နှင့် ပတ်သက်. မေးလျှောက်ခဲ့ပါဘူး။
နိဂုံးချုပ်မှာတော့ညစ်ညမ်း spam များကို e-mail, ဖွင့်လှစ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် / ဖတ်ပါနှင့်လည်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူသေူဝယ်ယူခဲ့သည်။ အဆိုပါညစ်ညမ်း spam များကို e-mail, စျေးကွက်ခိုင်မာတဲ့အကျိုးစီးပွားနှင့်အတူစျေးကွက်အစိတ်အပိုင်းရှိသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းဆန့်ကျင်လျက်ရှိသောသူတို့ကိုအုပ်စုများကိုသူတို့ဖွင့်ပွဲ / စာဖတ်ခြင်းနှင့်လည်း spam များကို e-mail, ကနေညစ်ညမ်း purchasing ကနေလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူသူတို့အား့တားရန်သင့်လျော်သောပညာရေးဆိုင်ရာကြားဝင်ပေးထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းထုတ်ကုန်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်သောသူတို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်ကျနော်တို့ spam များကို e-mail, ပေးပို့ခြင်းဆော်သြကြသည်မဟုတ်။ ရသည်မှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြဿနာများနှင့်အတူသူတို့အားထိုကဲ့သို့သောထုတ်ကုန်အတွက်ခိုင်မာတဲ့အကျိုးစီးပွားရှိသည်။ ထိုကဲ့သို့သောစျေးကွက် segment ကိုပစ်မှတ်ထား၏ကျင့်ဝတ်ကိုဤစာတမ်း၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန်ဖြစ်ကြောင်းအများအပြားကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
Boies, SC (2002) ။ တက္ကသိုလ်မှကျောင်းသားများ၏အွန်လိုင်းလိင်မှုဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်နှင့်ဖျော်ဖြေမှုကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်မှု - အွန်လိုင်းနှင့်အော့ဖ်လိုင်းလိင်အမူအကျင့်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားခြင်း။ လူ့လိင်၏ကနေဒါဂျာနယ်, 11 (2), 77-89 ။
Byers, LJ, Menzies, KS, & O'Grady, WL (2004) ကွန်ပျူတာ variable များ၏အင်တာနက်အပေါ်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အကြောင်းအရာများကိုကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ပို့ခြင်းအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှု - Cooper's 'triple-a engine' ကိုစမ်းသပ်ခြင်း။ လူ့လိင်၏ကနေဒါဂျာနယ်, 13 (3-4), 157-170 ။
Cohen ကို, အက်စ်, & Williamson, G. အ (1988) ။ ယူနိုက်တက်စတိတ်၏ဖြစ်နိုင်ခြေနမူနာအတွက်ရိပ်မိစိတ်ဖိစီးမှု။ အက်စ် Spacapan & အက်စ် Oskamp (။ Eds ။ ), ကျန်းမာရေး၏လူမှုရေးစိတ်ပညာ: လျှောက်ထားလူမှုစိတ်ပညာအပေါ် Claremont စာတမ်းဖတ်ပွဲ (စစ 31-67 ။ ။ ) ။ Newbury ပန်းခြံ, CA: Sage ။
Doring, မိုင် (2009) ။ လိင်အပေါ်အင်တာနက်ရဲ့သက်ရောက်မှု: သုတေသန 15 နှစ်ပေါင်းတစ်ဦးကဝေဖန်သုံးသပ်မှု။ လူ့အပြုအမူအတွက်ကွန်ပျူတာ, 25 (5), 1089-1101 ။
Fogel, ဂျေ, & Shlivko, အက်စ် (2009) ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ပြproblemsနာများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ထုတ်ကုန်များအတွက် spam e-mail ကိုအတူစားသုံးသူ။ အင်တာနက်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေး၏ဂျာနယ်, 14 (1) ။ ထံမှဇန်နဝါရီလ 20, 2010 ရယူရန်
Fogel, ဂျေ, & Shlivko, အက်စ် (2010) ။ ကိုယ်အလေးချိန်ထုတ်ကုန်များအတွက်ကိုယ်အလေးချိန်ပြandနာများနှင့် spam အီးမေးလ်။ တောင်ပိုင်းဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်, 103 (1), 31-36 ။
Goodson, P. , McCormick,,, & အီဗန်, အေ (2000) ။ အင်တာနက်ပေါ်ရှိလိင် - အွန်လိုင်းမှလိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြသည့်အရာများကိုကြည့်သောအခါကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုနှိုးဆွပေးသည်။ လိင်ပညာရေး & ကုထုံး၏ဂျာနယ်, 25 (4), 252-260 ။
Goodson, P. , McCormick,,, & အီဗန်, အေ (2001) ။ အင်တာနက်ပေါ်တွင်လိင်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းပြတ်သားစွာဖော်ပြထားသောပစ္စည်းများရှာဖွေခြင်း - ကောလိပ်ကျောင်းသားများ၏အပြုအမူနှင့်သဘောထားများကိုလေ့လာခြင်း။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 30 (2), 101-118 ။
Hald, GM က (2006) ။ ငယ်ရွယ်လိင်ကွဲဒိန်းမတ်လူကြီးများအကြားတွင်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း, 35 (5), 577-585 ။
Lam, CB, & ချမ်း, DK-S ကို။ (2007) ။ ဟောင်ကောင်ရှိလူငယ်များအနေဖြင့်ဆိုက်ဘာညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း - အချို့သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်နွယ်မှုများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်းတိုက်, 36 (4), 588-598 ။
Morimoto, အမ်, & Chang, အက်စ် (2006) ။ မလိုလားသောစီးပွားဖြစ်အီးမေးလ်နှင့်စာတိုက်မေးလ်တိုက်ရိုက်မေးလ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးနည်းလမ်းများအပေါ်သုံးစွဲသူများ၏သဘောထားများ - ထိုးထွင်းသိမြင်မှု၊ ထိန်းချုပ်မှုဆုံးရှုံးခြင်းနှင့်စိတ်တိုခြင်း။ Interactive မှကြော်ငြာခြင်း၏ဂျာနယ်,7(1), 8-20 ။
O'Reilly, အက်စ်, Knox, D. , & Zusman, ME (2007) ။ ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်းအပေါ်ကောလိပ်ကျောင်းသား၏သဘောထား။ ကောလိပ်ကျောင်းသားဂျာနယ်, 41 (2), 402-406 ။
OnlineEducation ။ (2010) ။ ညစ်ညမ်းနောက်ကွယ်မှနံပါတ်များကို။ ရယူရန်ဇန်နဝါရီလ 20, 2010 မှ
ပန်ဒါ။ (2009) ။ spam ဘာသာရပ်များ။ မှဇန်နဝါရီလ 20, 2010 ရယူရန်
PASW ။ (2009) ။ PASW, ဗားရှင်း 18. ချီကာဂို: PASW ။
Rosenberg က, အမ် (1986) ။ ကိုယ်ပိုင်ထင်။ Malabar, FL: Krieger ။
Selwyn, N. (2008) ။ misbehaving များအတွက်တစ်ဦးကဘေးကင်းလုံခြုံဆိပ်? တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူများအကြားအွန်လိုင်းမတော်မတရားနှိပ်စက်တစ်ခုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ လူမှုရေးသိပ္ပံ Computer ကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း, 26 (4), 446-465 ။